ကျစ်: ဘိုးဘွားအာဖရိကအနုပညာ - Afrikhepri Fondation
စနေနေ့, ဇူလိုင် 24, 2021
Cတွစ်တာတွင်သူနံနက်ခင်းတွင်၊ Seal of the Seal ၏ Keeper of Christiane Taubira က“ သမ္မတနိုင်ငံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေငြာချက်များကြောင့်ရုပ်ဆိုးလွန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ပွဲများနှင့်အလှဆင်ထားသည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေရမယ်။
သူတို့မှန်ကန်သည်ဟုယူဆသောအရာကိုခုခံကာကွယ်သူများသည်လူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့အားသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကမျှလေးနက်မှုမရှိကြောင်းနှင့်အရာဝတ္ထုစီးဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုရန်လိုသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်မိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာပြောဆိုသောသတ္တဝါများဖြစ်သည်။
ငါ့ထံသို့မတရားတဲ့သို့မဟုတ်စော်ကားသည်အဘယ်အရာ Accept ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ကြံတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ရုံကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအကြောင်းကိုဘာမျှသိသူကလူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, ပညာရေး, ကွဲပြားခြားနားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှတရား codes တွေကိုသို့မဟုတ်ကိုယျ့ကိုယျကိုအောင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်နေကြသည်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အချို့သူများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းပုံမပေါ်သည့်အရာများမှအရီရီရီယို၊ လူမျိုးရေး၊ လူများစွာသည်ပြက်လုံးများ၊ ဟာသများမှတစ်ဆင့်လူအများကသူတို့ကိုယ်တိုင်မထိန်းချုပ်သောအရာနှင့်မှားယွင်းသောရုပ်ပုံများကိုဖော်ထုတ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုမရှိသောသူများအတွက်သို့မဟုတ်မီဒီယာများပြသသည့်အရာများတွင်နှစ်သိမ့်မှုရသူများအတွက်အမှန်တရားဖြစ်လာ ။
မသိသောသူများအနေဖြင့်မနေ့က PURETREND ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ကျွန်တော်ဒီအဝတ်အစားကိုအဝတ်အထည်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နှင့်မင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဤဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေရန်မကောင်းသောအကြံရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် JADA PINKETT SMITH နှင့်သူ၏သန္ဓေသားတို့၏ဆွဲငင်ဖွယ်ကောင်းပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းခေါင်းစဉ်ပါ ၀ င်သည်။
စာနယ်ဇင်းသမားများဟုပြောဆိုသူများကသူတို့ပြောသည့်အရာကိုလက်မှတ်ထိုးရန် panache မရှိဘဲနှင့်အခြားအရာများကိုမည်ကဲ့သို့ရေးသားနိုင်သည်။
ELLE ကိစ္စကကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမှာခါးသီးတဲ့အရသာနဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး၊ ဒီ post ကိုမနေ့ကဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အောက်ပါမေးခွန်းကိုမေးခဲ့တယ်။ ဒီ Freelancer (သို့) စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုဘယ်မှာခေါ်သွားမလဲ။
ဒီ site ၏အဆိုအရကျစ်ခြင်းများသည်ကမ်းခြေနှင့်အနံ့အသက်တို့ကို ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက Bo Derek ၏အနံ့ခံသည့်ဆံပင်ပုံစံဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေတွင်ဝတ်ဆင်ရသောအလေးအနက်မဟုတ်သောဆံပင်ပုံစံ။ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခဲ့သောသူ၏ကျဉ်းမြောင်းမှုအကြောင်းကိုအတော်အတန်ဖော်ပြသည့်အခြားကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုက“ နက်နဲသောအရာ။ ဒီကျစ်လျစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်တာဟာအတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ဖို့အတွက် Puretrend ကသင့်ကိုကျစ်ကျစ်ကျစ်လျစ်လေးနဲ့ငုပ်ချလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သတိထားပါ၊ "
သူမကသူမသေပြီဟုသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့ကြသော်လည်းယခု ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များကအလွန်စိတ် ၀ င်စားသောရင့်ကျက်မှုလမ်းကြောင်းသည် Jada Pinkett Smith ၏ ဦး ခေါင်းတွင်ပြန်ပေါ်လာသည်။ Puretrend ကဒီဆံပင်ကြောက်စိတ်၊ "
မင်းသမီး Jada Pinkett Smith ရဲ့ဖြတ်တောက်မှုဟာတော်တော်လေးပြnotနာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာမှာမင်းသမီးသည်ကျောဘောင်းဘီများအားတံဆိပ်ကပ်ရန်ဝတ်ဆင်ထားသောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆံပင်ပုံစံသည်ညစ်ပတ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အဆင်းမလှဟုထင်ရသည့်ဤဖြတ်ခြင်းကိုပြပြီးမင်းသမီး၏အခြားလှပသောဆံပင်ပုံစံများကိုအဘယ်ကြောင့်မပြပါသနည်း။ Jada သည်ဤဆံပင်ပုံစံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်ပြီး၊ သူတို့သည်အနီရောင်ကော်ဇောတွင်အလွန်ကောင်းသည်သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကရှိခဲ့သည်။
လူအများစုကဖတ်ရှုသည့်စာမူကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားနိုင်ငံခြားသားများအဖြစ်ဖော်ပြသည့်ပျော်စရာပျော်စရာမဂ္ဂဇင်းများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအဖြစ်ရာစုနှစ်များစွာတည်ရှိခဲ့သောအနုပညာဆီသို့ထိုကဲ့သို့သောအနတ္တနှင့်စော်ကားမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အာဖရိကတိုက်ကြီးပေါ်မှာ။
မျက်မမြင်များသည်အာဖရိကတွင်ဆံပင်ပုံစံတစ်မျိုးထက်ပိုသည်။ ရှေးဟောင်းကတည်းကဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်အလင်းရောင်မမြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနုပညာသည်မိခင်များမှသမီးများအထိမိန်းမများကြားအချိန်ကတည်းကကူးစက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဘဝ၊ သေခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ထို့အပြင်နူဘီယာနှင့်ရှေးခေတ်အီဂျစ်တို့တွင်ပင်မိဖုရားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့ကိုဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ပြောဖို့မေ့နေပေမယ့်ယောက်ျားလည်းသူတို့ကိုဝတ်ဆင်။
ကျစ်ခြင်းအနုပညာကိုမွေးဖွားသည့်အခါယက်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အနက်ရောင်အမျိုးသမီးများ၏ frizzy ဆံပင်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နည်းလမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့မကြာခဏမေ့လျော့ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆံပင်ကသူတို့အထူနှင့် frizzy texture ကြောင့်သူတို့ရဲ့အထူкарабастанမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျစ်အားကစားခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်လည်းဆံပင်၏ပုံသဏ္oneာန်ကိုတစ်ထပ်တည်းဖြစ်စေရန်အတွက်ကျစ်၏ကြိုးများသည် frizzy ဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။
အဆိုပါကျစ်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်လှပသောနည်းလမ်းတွေအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လုပ်နေတာ။ သူတို့ကကျစ်လဲလျောင်းသို့မဟုတ်ထမြောက်တော်မူအတွက်, တာရှည်တိုတို, Bun ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
တိုတိုပြောရရင်ဆံပင်ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျစ်တွေနဲ့ရအောင်ရတယ်၊ ငါတို့ကပဝါတွေ၊ တာဘန်းတွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ ပုလဲတွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်။ အဲဒါတွေကိုမင်းကိုမင်းပြသဖို့မပြောနိုင်ဘူး။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်တွင်အသိသာဆုံးနှင့်၎င်းတို့၏ရွက်လွှင့်မှုတွင်လေအားဖြင့်ကျန်ရှိနေသေးသောဆီနီဂေါလူမျိုးတို့၏ဘဝသည် (ပါးလွှာသည်)၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီးငါဖော်ပြခဲ့သောအရာများဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသောစသည်တို့
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဗေဒအပြင်အခြားအာဖရိကနိုင်ငံများစွာတွင်ကျစ်။ ဆင်ခြင်း၏သင်္ကေတလည်းဖြစ်သည်။ ယနေ့အာဖရိက၌ပင်အချို့သောလူမျိုးစုများသို့မဟုတ်လူမျိုးစုများသည်ဘဝ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်မတူညီသောကျည်များကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ မိန်းကလေးကလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဒါမှမဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်အဖေလူမျိုးစုဖြစ်တဲ့Soninkéကြားမှာကျမတို့ကျောပိုးအိတ်တွေရှိတယ်။ စိတ်မသာညည်းတွားခြင်း၊ ဟားစာစ်အမေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအနုပညာကိုအထူးပြုသည့်မိသားစုများရှိသည်။ ထိုမိသားစုမှအမျိုးသမီးများသာသူတို့၏ဆံပင်ကိုလာလုပ်ရန်ခေါ်ကြသည်။ ဆံပင်ပုံစံကိုမည်သူမည်သူမဆိုလူ့အဖွဲ့အစည်းမှပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကျင့်ဝတ်များကိုလေးစားသူများသည်သူတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်စသည်တို့ကိုပုံပျက်သွားနိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်မင်းသား၊ ပန်းပဲသမား၊
သင့်ဆံပင်ကိုပြုပြင်ချင်သည့်အခါတိုင်းပြည်တွင်အဆန်းမဟုတ်တော့ - သင့်ခေါင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပေးနဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလက်တွေဆိုးနေနိုင်တယ်။ ပြီးတော့သူမရဲ့လှပတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်လူသိများတဲ့ "THE" ဆံပင်အလှပြုပြင်သူကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုချင်တာပါ။
သင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကိုဖော်ပြသောကုဒ်အမျိုးအစားများဖြစ်သောကျစ်များရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါစင်ကြယ်သောလမ်းကြောင်း၏ဤဆောင်းပါးသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းနေထိုင်ခြင်းမရှိသောအာဖရိကယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုစော်ကားခြင်းဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသည်။
ဆံပင်နှင့်အလှအပသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိယဉ်ကျေးမှုတိုင်း၌အမျိုးသမီးများအတွက်အရေးကြီးသောနေရာတစ်ခုအမြဲရှိသည်။ ဆံပင်ပုံစံကိုလည်းဂရိနှင့်ရောမအင်ပါယာလက်ထက်တွင်အမျိုးသမီးများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများတွင်လည်းဖက်ရှင်လောကတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဆင်တန်ဆာများနှင့်ဆင်တူသည်။ အကယ်၍ ကြယ်တစ်လုံးသည်မကောင်းသောလုပ်ထားသောသရဖူကိုဝတ်ဆင်ပါက၎င်းသည်ဆံပင်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုပြီးရာစုနှစ်များစွာကတည်ရှိခဲ့သောဤဆံပင်ပုံစံကိုမေးခွန်းထုတ်စရာအကြောင်းရှိမည်လော။ မဟုတ်ဘူး။
ဤဆောင်းပါး၌ -> ဒီမှာ, ကျစ်တဲ့ Brandy လိုအမေရိကန်အနက်ရောင်ကြယ်ပွင့်တွေကြောင့် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကမိန်းကလေးများခေါင်းပေါ်သို့ကျစ်ခြင်းသည်ကြီးမားတဲ့ပြန်လည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူမဒီဆံပင်ပုံစံ၏အငြင်းပွားဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့သည်။
ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းဟူသောဝေါဟာရကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုနှင့်ကျွန်ုပ်နားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့်ဤဆံပင်ပုံစံကိုဖြောင့်ခြင်းနှင့်ရက်လုပ်ခြင်းအတွက်စွန့်ပစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျစ်ကျစ်ကျစ်ကျစ်ကျစ်ကျစ်ကျစ်ကျစ်ကျစ်ကျက်ထက်ထ kalayan ဝတ်စားဆင်ယင်သည့်အခါငယ်ငယ်ကတည်းကကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပြီးမိခင်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ကိုစစ်ဆေးခွင့်ရှိသည်။ ထိုအခါအဘယျသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်လာသော ... ။ သင်ကြွင်းသောအရာသိ :-)))
မကြာသေးမီက Solange Knowles သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံအမြင့်ဆုံး IT GIRL ဖြစ်လာပြီး၎င်းတို့ကိုထူးခြားသောနည်းဖြင့်ဝတ်ဆင်သည်။ Destiny's Child အခမ်းအနားတွင် 9O အဖွဲ့တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည့်သူ၏ညီမဘီယွန်းစ်ကိုပင်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ဒါမှမဟုတ်အဆိုတော် Kery Hilson အဖြစ်:
အာဖရိကကျစ် BOX ကျစ်ထံအပ်နှံ Tumblr ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Anglophones ပေါ်ထွက်လာနဲ့လှပတဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးတွေကိုပြသနိုင်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြဟုဆိုသည်။
ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့, ကျစ်ကမိုက်မဲသောလူကိုမနှစ်သက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အပျြောအပါးအတှကျဒီမိုကရေစီရေးနှင့်သူတို့၏ nobility ၏အက္ခရာများပြန်လည်စတင်နေကြသည်။ မဟုတ်ဘူး !! ဒါဟာပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့်ကြောက်မက်ဖွယ်လမ်းကြောင်းသစ်မဟုတ်ပါ၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာချီ။ ရှိခဲ့ပြီးမကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သူ၏ဖက်ရှင်ပင်လျှင်အာဖရိက၊ အနောက်ရှိအနောက်အာဖရိကသို့ထွက်သွားပြီးသူ့ကိုမာလီတွင်မကြာသေးမီကတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိခင်များ၊ ညီအစ်မများ၊ အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး၊ ကျောင်း၌ရှိနေသေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်ဝမ်းကွဲများကိုသူတို့၏ခေါင်းပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အရာသည်ရုပ်ဆိုးကြောင်း၊ အပြစ်ပေးမှုကိုမြင်ရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
ငါကဒီမှာနဲ့အဲဒီမှာဖတ်တယ်၊ ဒေါသထွက်တာဒါမှမဟုတ်နာကျင်စေတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စအတွက်အချိန်ကုန်လိုက်တာပဲ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ostras မူဝါဒကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လေးစားမှုကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမှမပြောခြင်းသည်သဘောတူခြင်းနှင့်အရှုံးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်သင့်အားစော်ကားသူသို့မဟုတ်မလေးမစားပြုသူအားသူတို့၏အခွင့်အရေးအတွင်းတွင်ရှိသည်ဟုပြောခြင်းနှင့်တူသည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကျိုးမပြုလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့အားစံနမူနာယူသူများအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့သောအရာများကိုလှူဒါန်းခဲ့သူအများစုသည်ယခုအချိန်တွင်မရှိသေးပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့သာယာဝပြောရင်ငါတို့လက်ကိုသုံးပြီးပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုသုံးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပြီးငြင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလုပ်တာလဲ။
အပြင်, ငါစဉ်းစားသောအခါ, ELLE ကိစ္စကာလအတွင်း, တူညီတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ငါတို့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ဘာမျှမအတွက် "ဆူညံသံ" လုပ်နေသို့မဟုတ်ထံမှထံမှတောင်းပန်သူကိုဘေးဥပဒ်သားကောင်ကဲ့သို့ထောက်ပြ လူဖြူတွေကိုလေးစားတယ် !! ဟားဟား ...
ငါစဉ်းစားသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ငြင်းဆန်ဖို့ပဲ !! ငါတို့အတွက်အတုပုံစံနှင့်မဖက်ပါစေနှင့်၊ သင်ဘာပြောနေသည်ကိုသင်မသိပါက ပို၍ ကောင်းသည်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၊ ဘလော့ဂါများ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် AFROSOMETHING ဆိုဒ်၏ထိပ်တန်းအက္ခရာကြောင့်စည်းလုံးညီညွတ်စွာကျေးဇူးတင်စကားကိုအမေရိကန်နှင့်ဝေးလံသောပြင်သစ်မီဒီယာများတွင်ပင်ကြားသိခဲ့ရသောဤအငြင်းပွားဖွယ်ရာသည်ဝေဖန်ခံရသူများအားပင်အကျိုးရှိစေသည်။ နှလုံးသားနှင့်ဒေါသအရှိန်ကြောင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိုထောက်ပံ့ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ELLE သည်သူတို့၏ site သို့မဟုတ်စက္ကူမဂ္ဂဇင်းတွင်သူတို့အကြောင်းပြောဆိုနေခြင်းကြောင့်ယနေ့မည်သူပျော်ရွှင်သနည်း။
ELLE ၏ရှေ့စာမျက်နှာသို့မဟုတ်အနက်ရောင်အလှအပအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွင်မဂ္ဂဇင်းအတွင်း၌ပင်အနက်ရောင်အမြိုးသမီးမြားစှာကိုကြှနျုပျတို့မတှေ့ရဖူးပါ။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီမဂ္ဂဇင်းနဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကြားရမယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိတယ်၊ ငါတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာဂုဏ်ယူတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ကုဒ်တွေကိုသိတယ်ဆိုတာပြတဲ့အခါမှာဖြစ်ရပ်မှန်တွေရှိတယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူကရယ်စရာကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့်သင်၏အကောင်းဆုံးလက်နက်သည်ယဉ်ကျေး။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိရန်နှင့်သူတို့၏စကားများသည်clichésသို့မဟုတ်သာမန်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှချေးယူသည်ဟုငြင်းခုံမှုများဖြင့်သရုပ်ပြရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်clichéများ၊ သာမန်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသို့မဟုတ်အခြားသောမထီမဲ့မြင်ပြုမှုမျိုးကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။
မိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာပြောရန်မှာပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ တည်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုပုံစံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ တခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည်မိုက်မဲ။ ပညာမတတ်သူများနှင့်သင်ဆက်ဆံနေရသည်၊ သင်ကဘာလဲဆိုတာကိုကြိုတင်သိမြင်ထားသည့်အတွေးရှိသူ၊ သင်ကသူတို့ကိုသူတို့လမ်းမှားဖြင့်ပြသဖို့လိုသည်။
ဤဆောင်းပါးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤသို့ရေးသားခြင်းသည်ရှက်စရာဖြစ်ကြောင်း၊ စုံစမ်းရန်လိုအပ်သည့်အခါနှင့်ကျစ်၏ဓါတ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ပိုက်ကွန်တွင်ပျောက်နေသည်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်ငါက PureTrend ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှာရှိတဲ့ ၀ တ်မှုန်များမြေထဲကိုအနည်းငယ်ငုပ်ပြီးကမ်းလှမ်းတဲ့သူပဲ။ သတိပြုပါ၊ သင်သည်မိန်းမများကိုအနည်းဆုံးလေးစားမှုရှိပါကသင်၏ဆောင်းပါးကိုသင်၏ site မှဖျက်ပစ်ပြီးတောင်းပန်ပါ။
ပြီးတော့ဒီအနုပညာကိုအရိုအသေပြုပြီးဆံပင်အလှပြုပြင်သူတွေဟာဒီအနုပညာကိုမွေးမြူပြီးထုတ်လွှင့်တဲ့နေရာပါ။ ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဖျာတစ်ခုချင်းစီသည်မတူ၊ ထူးခြားသည်။ ဆံပင်ပုံစံနောက်ကွယ်တွင်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူသို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်သမားများသည်သူတို့အချိန်ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုလှပအောင်ပြုလုပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးချသူများဖြစ်သည်။ ရလဒ်များကိုကြည့်။ လှပသောကျွန်ုပ်တို့လည်းစိတ်မရှည်ဖြစ်နေသည်။ ပဲရစ်မြို့တွင်ပင်ကြည့်ပါ။ ဤအနုပညာရှင်ထိုက်သောကိုယ်စားလှယ်နှစ် ဦး သည် SEPHORA JONES တွင်ရှိသည်။ ဤတွင် ICI နှင့် NADINE MAKETY တို့ကပါရမီရှင်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူနှစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအနက်နှင့်အနိမ့်ဆံပင်များကိုဆံပင်ပုံစံများဖြင့်ဆံပင်ပုံစံများကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာပြင်းထန်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုလိုအပ်သည်တစ်ခုအနုပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအလုပ်၏နာရီ, အမှုကိုပြုခံရဖို့ပုံကြမ်းများ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်။
ဒါဟာအချိန်ကာလမှာစားတဲ့နေရာ၊ အမျိုးသမီးတွေကြားမှာဝေမျှရမယ့်အခိုက်အတန့်ပေါ့။ အာဖရိကရှိဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းသည်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သူမသည်လက်များဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုသူတော်ကောင်းတရားနှင့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တည်မြဲစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။ ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့အချို့သောကောင်းမွန်စွာလုပ်ကျစ်များနှင့်အခြားသူများကိုမရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကကမ္ဘာပေါ်မှာဖြတ်တောက်မှုသို့မဟုတ်ဆံပင်ပုံစံတွေအားလုံးလိုပဲ။ ဤသို့သောဆံပင်ပုံစံကိုလူသိရှင်ကြားစိန်ခေါ်ရန်လိုအပ်ပါသလား
ဒီတော့ဒီဆံပင်ပုံစံကိုသင်အနည်းငယ်လေးစားမှုမရှိဘဲလေးစားမှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တော့မိန်းကလေးများ၊ မိန်းမများနှင့်မိခင်များရဲ့အမှတ်တရများနှင့်အတူလိုက်ပါ။ ငါတို့အတွက်ဆံပင်ပုံစံကမင်းတို့အတွက်ရေဘဝဲအကြောင်းသတိပေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ ၀ မ်းသာတယ်၊ ဂုဏ်ယူပြီးထိုက်တန်တဲ့အနက်ရောင်မိဖုရားတွေလိုဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့အတူလမ်းလျှောက်သွားတယ်။ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်များစွာကိုငါပိုပြီးဖတ်ရှုလေလေဆံပင်တွေကိုပိုပြီးချစ်လေလေ၊ ငါကဘာလဲ
သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ခေါင်းကိုတဆင့်ပြေးခြင်းနှင့်များစွာသောအရှက်ပုံရသော ... ဤမေးခွန်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်မကူညီနိုင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာအနောက်တိုင်းအလှအပရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက်ညည်းညူစရာမလိုဘဲကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တရတွေကိုဒီလူတွေကမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖန်တီးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုဆောင်းပါးတွေထုတ်ဝေခွင့်ပြုခဲ့လို့လား ?? ငါတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဆံပင်၊ အရေခွံစတာတွေကိုတောင်မကြိုက်ဘူးလို့သူတို့ထင်ကြမလား။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကတ်ထူထူဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြဖို့အချိန်တန်တဲ့အခါသူတို့တုန့်ပြန်မှုကမကြာခဏပဲ“ ငါတို့ကဲ့ရဲ့စရာမလိုချင်ဘူး၊ စာဖတ်သူတွေကိုအသိပေးရတာကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ” Huummm ……မှတ်ချက်မရှိပါ။ အရမ်းလွယ်တယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်သူတွေကိုဂျာနယ်လစ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကို REFERENCE အဖြစ်ကူးယူသင့်တဲ့စံပြအလှတရားပုံစံကိုကျင့်သုံးဖို့အတင်းအကျပ်လုပ်မယ့်အစား။ သင်က“ hasbeen” (သို့)“ အရုပ်ဆိုး” တဲ့မနာလိုမှုကိုစဉ်းစားမိတဲ့သန်းနဲ့ချီတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ကွဲပြားမှုကိုမွေးမြူပြီးမြှင့်တင်ဖို့လုပ်တယ်
ဘာမှမသိတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒဒါမှမဟုတ်အယ်ဒီတာ့ဘောင်အရကောင်းမကောင်းအချက်တွေကိုပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်ကျော်လွန်တဲ့အရာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လေ့လာပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကအမြဲတမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရောနှောခြင်းနှင့်မျိုးစပ်ခြင်း၏အဆင့်မှာအသွင်ပြောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ pigtails hasbeen ဘယ်တော့မှလိမ့်မည် !! ငါတို့ရှေးခေတ်မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ဖာရောဘုရင်ကြီးနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေ ဦး မယ့်အချိန်မှာမင်းနဲ့မင်းရဲ့ site ကိုတောင်မှမင်းကိုမင်းကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းရှိနေသေးလို့ပဲ။ သင့်ကိုညှဉ်းဆဲသောသူတို့၏မင်းအပေါင်းတို့နှင့်၎င်း၊
Fatou N'diaye အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
SOURCE မှ: အနက်ရောင်အိတ်အိတ်
via: Beni ကှနျဂို
Lupita Nyong'o သည်မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးအမျိုးသမီးကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်